Dal hal milyan oo doolar ku gadaya jinsiyaddiisa - BBC News Somali
Dal hal milyan oo doolar ku gadaya jinsiyaddiisa
Jigjiga: Madaxweyne ku-xigeenka Xamdi Aadan oo qirey tacaddiyo dhacay
Baarlamaanka Canada oo ogolaaday in Xashiishadda faakihaysi loo adeegsado
Mauritius oo gadaysa dhalashadeeda iyo baasaboorkeeda
Ciyaaraha Koobka Adduunka ee maanta oo Talaado ah
"Askarta Itoobiya falal argagixiso ayay gaystaan"
Posted at 13:51 19 Jun
Taageerayaasha Senegal oo iyaga oo xardhan waddooyinka Moscow maraya
Weriyaha BBC-da Victoria Uwonkunda ayaa aragtay taageerayaashan Senegal oo dharkan isu eg iyo rinji isku soo xardhay iyaga oo isu diyaarinaya ciyaarta ay la yeelanayan Poland.
Waxay isku soo qoreen "Senegal gagnez? oo macnaheedu yahay “Senegal ma badin doontaa?”
Ghana: boqollaal ruux oo hoy la’aan ku noqday daadad
Roobab mahiigaanno ah oo habeen hore ka da’ay magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana ayaa dhaliyay daadad, waxaana ku xanibmay qaar ka mid ah dadkii deegaanka oo biyuhu go’doomiyeen guryahooda.
Daadadka ayaa sidoo kale garaawi qaaday, hantina burburiyay.
Boqolaal qoys ayaa hoy la’aan noqday. Dhinaca galbeed ee magaalada oo joogeedu hooseeyo ayay daadadku u gaysteen saamaynta ugu badan.
Warbaahinta MyJoyOnline news ee dalka Ghana ayaa soo bandhigay sawirradan.
Posted at 13:05 19 Jun
Falanqayn: kulammada Senegal Vs Poland & Ruush Vs Masar
Waddankii 5aad ee ka mid ah dalalaka qaaradda Afrika uga qayb galaya koobka adduunka, Senegal, ayaa caawa cayaartiisa ugu horraysa la yeelanaya kooxda Poland oo ay ku wada jiraan guruubka A.
Masar oo hore looga soo badiyey waxay cayaarteedi labaad la yeelan doontaa Ruushka oo dalkiisa lagu cayaarayo.
Waxaan qormadan ku eegaynaa rajada ay qabaan labadaas dal ee Afrikaanka ah iyo Fursadaha ay haystaan. Falanqayntan waxaa samaysay Nasrokiin Xaashi Nuurre oo ka faalloota isboortiga, haatanna ku sugan dalka Ruushka.
Ruushka Vs Masar
Labadan kooxood waxay ku wada jiraan guruubka A.
Falanqayntan oo intan ka badan kaga bogo lifaaqan
Posted at 11:36 19 Jun
Qodobbada Idaacadda Duhurnimo
Qodobbada aad Idaacadda Duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
Muqdisho oo lagu burburinayo dhismooyin sharcidaro lagu dhistay.
Shiinaha iyo Maraykanka oo xaalkoodu sii xumaanayo.
Qaramada Midoobay oo sheegtay in 68 milyan oo qof ay dunida qaxooti ku yihiin.
Iyo Ra'iisulwasaaraha Itoobiya oo la soo baxay dhaqan aan looga baran madaxda isaga ka horaysay.
Posted at 11:07 19 Jun
Aqalka Hoose ee baarlamaanka Canada ayaa cod ku ansixiyey in la sharciyeeyo in xashiishadda ay dadku u cabbi karaan si faakihaysi ah.
Sharcigaas oo ay soo bandhigtay xukuumadda haatan talada haysa ee Liberal-ka ah ayaa waxa lagu meel mariyey 205 cod halka ay 82 xildhibaan oo keli ahi diideen. Sharcigan waxa dhaqan galkiisa ka horreeya ansixinta Aqalka Sare oo loo gudbin doono.
Aqalka Sare ma hor istaagi karo sharcigan balse dib ayuu u dhigi karaa.
Haddii Canada ay sharciyayso waxay noqon doontaa dalkii koobaad ee xubin ka ah ururka G7 ee ay ku midaysan yihiin toddobada dal ee hodanka ah ee xashiishadda sharciyeeya.
Balaayiin doolar oo xashiishad ah ayaa lagu kala gataa Canada sannadkii, haddii la sharciyeeyana malaayiin doolar oo canshuuro ah ayaa la rajaynayaa in laga helo.
Posted at 10:12 19 Jun
Mauritius oo gadaysa jinsiyaddeeda iyo baasaboorkeeda
Dawladda Mauritius ayaa ajaaniibta u soo bandhigtay fursad ay muwaadiniin ku noqon karaan iyaga oo bixinaya hal milyan oodoolar oon celis lahayn.
Qofka jinsiyadda noocaas ah dalbanaya haddii uu yahay xaas waxaa looga baahan yahay in dadka kale oo ku tiirsan iyo qof kaste oo qoyskiisa ka tirsan uu ka bixiyo 100,000 oo doolar oo dheeri ah.
Waxaa arrintaas ku dhawaaqay ra’iisulwasaaraha iyo wasiirka maaliyadda oo soo bandhigayay miisaaniyadda dalka ee 2018ka.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa cambaareeyay go’aankaas.
Ashok Subron oo ah hogaamiyaha xisbiga Rezistans ek Alternativ ee wadaniyadda ku kalax tagay ayaa sheegay “in dhalashada dal aysan wax soo saar ahayn isla markaasna aysan sicir lahayn alaab ahaanna aysan noqon karin”
Waa maalinkale oo ay dhici doonaan saddex kulan oo ka tirsan Koobka Adduunka.
Maxamed Salaax ma laga yaabaa in uu safto ciyaarta ay isaga hor iman doonaan Ruushka? Waxaa hubaanti ah in Masar ay sidaa yeeli doonto oo ay soo safi doonto laacibkeeda afka hore uga dheela kooxda Liverpool, waxayna doonaysaa in ay nooleeyso rajada ay ka qabto in ay Koobka Adduunka sii joogto.
Ciyaartaas waxay soo galaysaa 9 fiidnimo ee geeska Afrika.
Waxaase ka soo horraysa ciyaar dhex mari doonta Colombia and Japan oo dhacaysa 3 galabnimo.
Poland iyo Senegal ayaa iyaguna is arki doona 6da makhribnimo.
Dhismeyaal sharcidarro ah oo Muqdisho lagu burburiyay
Waxaa dhulka lala simay guryo la sheegay in si sharci darro ah looga dhisay agagaarka garoonka LLP-Jeenyo ee magaalada muqdisho sida uu bartiisa Facebook ku baahiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, Injineer Yariisoow.
Posted at 7:53 19 Jun
"Siyaasadda soo galootiga Trump oo la difaacay"
Wasiirka amniga gudaha ee dalka Maraykanka ayaa difaacday siyaasadda maamulka Trump ee lagu kala sooco waalidka soo galootiga ah iyo carruurtooda marka ay si sharci darro ah uga soo tallaabaan xadka uu Maraykanku la leeyahay dalka Mexico.
Kirstjen Nielsen ayaa sheegay in ay Aqalka Congaress-ka u taallo haddii wax laga baddalayo sharcigaas,wuxuuna ku adkaystay in dalka Maraykanku uu yahay mid naxariis badan.
Posted at 7:36 19 Jun
Kim Jong-un oo Shiinaha ka dagay
Hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong-un ayaa markii saddexaad sannadkan gudahiisa booqanaya dalka Shiinaha.
Kim ayaa ka dagay magaalada Beijing booqashadiisa ayaana imanaysa toddobaad ka dib markii uu dalka Singapore kulanka kula la qaatay madaxweyne Trump.
Mar sii horraysayna Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyay in la baajiyay dhoolatus ay si wada jir ah u samayn lahaayeen milatarigooda iyo kuwa Maraykanka oo la qorsheeyay bisha Agoosto.
Dhoolo tus ay ciidammada Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanku u balansanaayeen ayaa la baajiyay
Posted at 7:33 19 Jun
"Tuulo kasta oo dalka Itoobiya ku taalla dadbaa lagu jir dilay"
Ra'iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa laamaha ammaanka ee dalkiisa ku eedeeyay in ay gaystaan falal argagixiso iyaga oo si sharci darro ah dadka u xira una jir dila.
Abiy ayaa xilka loo dhaariyay labo toddobaad ka hor isaga oo ballan qaaday in uu isbadallo waawayn samayn doono.
Kumannaan ruux oo ay ka mid yihiin dad siyaasad u xirnaa ayaa la sii daayay, bishan horraanteediina wuxuu shaqada ka tiray taliyihii ciidammada iyo midkii sirdoonka.
Billo ka hor wax aan la filan karin ayay ahayd in qof masuul ah uu dawladda Itoobiya ku eedeeyo falal argagixiso. Balse arrintaas ayuu hadda ku dhaqaaqay ra'iisulwasaaraha cusub.
Warbixintan oo faahfaahsan lifaaqan kaga bogo
Posted at 7:16 19 Jun
Subax wanaagsan akhyaarta halkan naga daalacataay kuna soo dhawaada, tabinteenna tooska ah ee maanta oo Talaado ah taariikhduna tahay 19 Juunyo 2018ka.